China Nezve mbishi zvigadzirwa Kugadzira uye Fekitori | Teng'an
Zvinoenderana nehukuru hwakasiyana hwealuminium ndiro dzinogona kukamurwa kuve mahwendefa matete uye epakati mahwendefa akakora. Iyo GB / T3880-2006 standard inoratidzira kuti iyo ukobvu isingasviki 0.2 mm inonzi aluminium foil.
FOB Mutengo: US $ 2300 / tani
Minimum yekuraira huwandu: 10 / tani
Kupa Mazano: Matani chiuru pamwedzi
Kurongedza Specification: 25kg / dhiramu kana 25kg / bhegi
Nezve sampling: Yemahara sampling yepasi pe5 kg
Izvo zvinonzi zvakapetwa kaviri zero foil firipi ine mazero maviri mushure mechikamu che decimal kana ukobvu hwayo huchiyerwa mm, kazhinji aruminiyamu foil ine ukobvu hweisingasviki 0.0075mm. Kana ikaburitswa nechirungu, gobvu rakadanwa rinonzi "heavy gaugefoil '", zero zero foil inonzi "medium gaugefoil", uye mbiri zero zero inonzi "lightgaugefoil'". Kune dzimwe nyika, aluminium foil ine ukobvu ≤40ltm dzimwe nguva inonzi light gauge foil, uye aluminium foil ine ukobvu> 40btm inodaidzwa kuti pamwe inorema gaugefoil.
Aluminium foil chinhu chinopisa chinotsika icho chakamonerwa zvakananga mumashiti matete nesimbi aluminium. Yayo inopisa kutsika mhedzisiro yakafanana neiyo yakachena sirivheri foil, saka inonziwo nhema sirivheri foil. Nekuti aluminium ine yakapfava dhizaini, yakanaka ductility, uye sirivheri-chena kubwinya, kana iro rakapetwa jira rakaiswa pane offset bepa ine sodium silicate uye zvimwe zvinhu kugadzira aluminium foil, inogona zvakare kudhindwa. Nekudaro, iyo aruminiyamu foil pachayo iri nyore kuisa oxidize uye ruvara rwunozoita rima, uye ruvara rwunozopera kana rwakwizwa kana kubatwa, saka haruna kukodzera kupisa kutsikisa kwemabutiro emabhuku uye ma periodicals ayo akachengetwa kwenguva yakareba. Zvinoenderana nemusiyano mukukora, aruminiyamu foil inogona kukamurwa kuita gobvu pepuru, zero zero foil uye kaviri zero foil. Iyo aruminiyamu yezvinhu zvakapetwa zero zero aluminium pepi iri pamusoro pe99%.
CERTIFICATE OF ANALSIS
Chigadzirwa: Aluminium Paste yeAerated Concreat Batch HERE:
20191212 Zuva Rokugadzira:
Zvita 12, 2019
Muenzaniso Nhamba: GLS-65 Zuva Rokuedzwa: Zvita 12, 2019 Zuva Rokupera: Zvita 12.2020
ZVINHU KUTSANANGURWA MHOSI YEMAHARA
Zvisina kugadzikana zvemukati ≥65% 65.6%
Kushanda AL Zvemukati ≥88 92.3%
Chiyero cheMvura yekuparadzira Hapana huwandu hwezvikamu Hapana huwandu hwezvikamu
Chitarisiko Sliver grey
Sieve vakasara 1.5% -2.5%
Kavha Dhata Iron dhiramu uye bhegi repurasitiki kana bhegi rakarukwa
ONA Tinogona kushandura kugadzira izvo zvisina kugadzikana zvemukati uye solvent zvinoenderana nezvaunoda.
Diretor: Cui zeguo Muongorori: Wang Hongmei Inspector: Wang Hongmei
Pashure: Nezve aerated kongiri matombo uye mahwendefa (AAC / ALC)
Zvadaro: Nezve zvigadzirwa zvekugadzira
aac flake aruminiyamu upfu
aerated aluminium poda
aruminiyamu upfu uye namatidza
Iko kukanganisa kwealuminium poda pane aerated con ...
Nezve aerated kongiri matombo uye mahwendefa (AAC / ALC)